Nhau - IFEX 2019 IN INDIA
IFEX 2019 MU INDIA
Feng erda Boka rakapinda mu2019 IFEX muIndia kubva muna Ndira 18 kusvika 20. Wakave musangano wakanaka weiyo indasitiri yekutangisa, Takasvika pakuziva vazhinji vevatengesi uye mafekitori ekutanga muIndia.
Feng erda Boka rine maSubidiaries maviri: Tengzhou Feng Erda Metal Zvigadzirwa Co, Ltd uye Tengzhou Delifu Kukanda Chinyorwa Co., Ltd. Fengerda main zvigadzirwa zvifukidze: Simbi Shot, Simbi Grit, Chiwanikwa Kukanda Simbi Pfuti, Isina Simbi Pfuti, Simbi Dura Wire Shot ect. Delifu main productcover: Ferrosilicon, Ferromanganese, Silicon Manganese Alloy, Ferrochrome, Ferromolybdenum Inoculants ect.Zvigadzirwa zvedu zvinoshandiswa muindasitiri yekutangisa, indasitiri yemuchadenga, indasitiri yemotokari, indasitiri yekuvaka ngarava zvichingodaro.
67th Indian Foundry Congress & ne IFEX 2019, Cast India Expo Zviratidziro pamwe chete ne15th Asia Foundry Congress musi wa 18-19-20 Ndira, 2019 inogarwa naDelhi NCR Chitsauko kuIndia Expo Center neMart, Greater Noida, NCR yeNew Delhi pachinzvimbo che iyo Dunhu rekuchamhembe kweInstitute of Indian Foundrymen.
Indian Foundry Indasitiri inonakidzwa nechinzvimbo chechipiri pakukura mugadziri wezvinhu zvakakandwa pasirese zvine gumi mamirioni ematani ekugadzira pagore.
Musangano uyu unenge uri musangano wekukanda vagadziri, vatengesi vekutangisa, vatengi vachikanda uye vezvemabhizinesi kuti vaongorore nzira nyowani muindasitiri uye varatidze kugona kwavo. Chiitiko chaicho pachacho chinokurudzira nharaunda yeFoundry uye vadzidzi vatsva sezvo isu tiri kutarisira vanopfuura 1500 vakanyoreswa nhume nevashanyi zviuru gumi panguva ino vachiita musangano mukuru wepasirese weindasitiri yevatangi.
Iyo chete yekutengeserana muIndia, iri kukurumidza kuve imwe yenzvimbo dzakakosha dzekutsvagisa nzvimbo muAsia - Cast India Expo ichave yakarongeka panguva imwe chete kune IFEX 2019 uye 67 Indian Foundry Congress. th Iyi ipuratifomu yakanakisa yematangi kubva kumatunhu ese eIndia kuratidza kugona kwavo uye kugona kwavo kune vatengi vari kuuya kubva pasirese.
FENGERDA GROUP inotarisa pahunhu, inogadzira mhando, inoshumira vatengi uye inotora zvemagariro mutoro.Iyo yakagamuchirwa zvakanaka nevatengi vekunze nekune dzimwe nyika.